Umqeqeshi weSuperSport uthi abadlali bakhe babukeka bebukhali | Scrolla Izindaba
Umqeqeshi weSuperSport uthi abadlali bakhe babukeka bebukhali
Umqeqeshi weSuperSport United uKaitano Tembo uthi abadlali bakhe babukeka bevuselelekile futhi bebukhali ngaphambi komdlalo wabo neStellenbosch FC.
I-United izodlala nohlangothi lweStellies oseluthuthuke kakhulu e-Danie Craven stadium ngoLwesihlanu ebusuku emdlalweni we-DSTV Premiership.
UTembo unikeze abadlali ikhefu ngemuva komdlalo wabo abangakwazanga ukuthola kuwo amagoli ngesikhath bebhekene ne-TS Galaxy mhla zi-5 kuNdasa.
“Lokho kubonakala sengathi kusize kakhulu. Abadlali babukeka benomdlandla. Besishoda ngokuba bukhali emidlalweni yethu embalwa edlule,” kusho uTembo.
“Siyethemba ukuthi sizobe sikulungele ukudlala neStellies ngoba bayiqembu elithuthuke kakhulu. Benze kahle emidlalweni yabo emithathu yokugcina yeligi.”
Abadlali bakaSteve Barker, basanda kuhlulwa ngamabili eqandeni ngabaholi be-log iMamelodi Sundowns, babekwe endaweni yesishiyagalolunye kwiligi ye-DStv premiership namaphuzu angama-21 emidlalweni eyi-19 kanti abadlali bakaTembo njengamanje basendaweni yesine ngamaphuzu angama-34 emidlalweni eyi-20.
UTembo uthe ulindele umdlalo oshesha kakhulu ngenxa yabadlali beStellies abasheshayo nabadlali bebhola abanjengoNathan Sinkala abadlala phakathi nenkundla.
“Bayiqembu elisebenza kanzima elinabadlali abahle. Kufanele sizame ukulingana nejubane labo ngoba banabadlali abanejubane futhi abadlala kahle kakhulu njengoLelethu Skelem, u-Ashley du Preez, kanye noDeano van Rooyen,” kusho uTembo.
AMatsatsantsa-a-Pitori adlale ngokulingana kwemithathu ahlulwa kowodwa emidlalweni emine edlule yeligi futhi ahluleka ukuthola amaphuzu emidlalweni yayo emibili edlule.
I-United idlale ngokulingana ngelilodwa ibhekene neKaizer Chiefs, kwathi i-Orlando Pirates yahlulwa ngelilodwa eqandeni ibhekene noSuthu walandela ukubambana ngo-0-0 ngesikhathi bebhekene neGalaxy ekuhambeni kwabo kokugcina.
I-United igcine ukunqoba maphakathi noNhlolanja ngemuva kokushaya iCape Town City ngamabili kwelilodwa.